DHEGEYSO: Wiil Soomaali ah oo robot-yada sanceeya oo tartan caalami ah ku guulaystay (Warbixin & waraysi) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Wiil Soomaali ah oo robot-yada sanceeya oo tartan caalami ah ku...
DHEGEYSO: Wiil Soomaali ah oo robot-yada sanceeya oo tartan caalami ah ku guulaystay (Warbixin & waraysi)
(Hofors) 02 Luulyo 2018 – Howl ka bilaabatay degmada Hofors oo dhacda gobolka Gävleborg ayuu dhowaantan guul ka soo hooyay Yuusuf oo 15 jir ah magaalada Monterael ee dalka Kanada.
Halkaasina oo lagu qabtay tartankii kama dambeeysta ahaa ee ciyaar lagu magacaabo Robo Cup oo lagu tartamayay aaladaha is wada ee Robot-ka iyo sanceeyntooda.
Yuusuf Maxamed Amiin oo ah 15 jir dhigta fasalka sagaalaad ee dugsiga Peterskolan ee magaalada Hofors, ayaa isaga iyo dhowr ardey oo ey iskuul wada dhigtaan waxay horraantii ka qayb galeen tartan ka dhacay magaalada Linköping oo ey ku tartamayeen arday dhigata iskuullo ku yaala magaalooyin kala duwan, halkaasoo ay guruubkiisa guushii ku raacday.
Kaddibna waxay u kicitimeen dalka Canada, halkaasoo ay magaalada Montreal uga qayb galeen tartanka caalamiga ah ee Robo Cup oo ay isna ku guulaysteen.
Hoos ka dhegeyso warbixin uu Maxamed Xaaji oo ka tirsan Hadalsame ka diyaariyay waraysi uu ka qaaday Yuusuf Yare.
Previous articleRASMI: Kooxda Arsenal oo ku dhawaaqday saxiixa Sokratis Papastathopoulos – (Lambarkee u xiran doonaa Gunners?)
Next articleWAR CUSUB: Sweden oo LABA LAABAYSA kaalmada ay siiso Somalia + Sawirro (Berri la soco waraysi aan ka qaaday Wasiirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Sweden)